China MVS Vertical Axial kuyerera uye yakavhenganiswa kuyerera submersible sewage pombi fekitori uye vagadziri | Tongke
MVS dzakateedzana axial-kuyerera mapombi AVS akateedzana-akasangana-kuyerera mapombi (Vertical Axial kuyerera uye Akasanganiswa kuyerera submersible sewage pombi) ndezvazvino zvigadzirwa zvinobudirira zvakagadzirwa nenzira yekutora yekune dzimwe nyika tekinoroji. Pombi nyowani 'inokwana 20% yakakura kupfuura yekare. Iko kushanda kuri 3 ~ 5% yakakwira kupfuura yekare.
Nezvinogadziriswa impellers zvine zvakanakira hukuru hukuru / yakafara musoro / yakanyanya kushanda / yakafara kunyorera zvichingoenda zvakadaro.
A: pombi chiteshi idiki pamwero, iko kuvaka kuri nyore uye kudyara kwakadzikira zvakanyanya, Izvi zvinogona kuchengetedza 30% ~ 40% pamutengo wekuvaka.
B: Zviri nyore kuisa kuchengetedza uye kugadzirisa iyi pombi.
C: Yakaderera ruzha hupenyu hwakareba.
Izvo zvinhu zvezvakateedzana zveAVS / MVS Axial kuyerera uye yakavhenganiswa kuyerera submersible pombi inogona kunge ichikanda ductile simbi mhangura kana simbi isina simbi.
AVS / MVS Axial kuyerera uye Akasanganiswa kuyerera anonyudza pombi anokodzera kugokora cantilever kuisirwa, tsime cantilever kuisirwa uye kongiri tsime cantilever kuisirwa
ZVINHU ZVINOGONESESA PUMP
4.Water Chikamu Chinja
5. Dare rekutonga
Pashure: Yakareba Shaft Vertical Turbine Gungwa Mvura Indasitiri Guta Mafashama Kudzora Drainage Pump
Zvadaro: Submersible Tsvina tsvina Mvura Yakanyura Pump
Dhayamita DN350-1400 mm
Kukwanisa 900-12500 m3 / h
Musoro kusvika 20m
Liquid Kupisa kusvika ku50 ºC
Kuiswa kweKubvisa uye Kuburitsa Zvikwepa
1.Suction Pipe: zvinoenderana nepepa rekudhirowa mubhukwana. Kudzika kudiki kwepombi pasi pemvura kunofanirwa kuve kwakakura kupfuura datum mumufananidzo.
2.Discharge: kurova-rova vharafu uye dzimwe nzira.
3.Installation: MVS akateedzera akakodzera kugokora cantilever kuisirwa, tsime cantilever kuisirwa uye kongiri tsime cantilever kuisirwa.
Submersible mota (MVS akateedzana) Simba kirasi: yemagetsi mashandiro inosangana ne GB755
Kudzivirirwa kirasi: IP68
Kutonhora system: ICWO8A41
Yekutanga yekumisikidza mhando: IM3013
Voltage: inosvika 355kw, 380V 600V 355KW, 380V 600V, 6kv, 10kv
Insulation kirasi: F
Rated simba: 50Hz
Kureba kwetambo: 10m
Mhando iyi ine maviri kana matatu echisimba zvemakaniki. Chisimbiso chekutanga, chinosangana nemvura, chinowanzo gadzirwa necarbon silicon uye kabhoni yesilicon. Yechipiri neyechitatu zvinowanzo gadzirwa ne graphite uye carbon silicon.
MVS AVS yakateedzana ine leakage yekudzivirira sensor. Kana iyo imba yemafuta yemota kana waya-bhokisi riri kudonha, sensor ichapa yambiro kana kumira kushanda uye chengetedza iyo chiratidzo.
Nyanyisa kupisa Mudziviriri
Iyo ichitenderera yeMVS yakateedzana submersible mota ine overheat mudziviriri. Kana yanyanya kupisa, yambiro ichapihwa kana mota inomira kushanda.
Tichitarisa kubva kudivi rekumusoro, iyo impeller iri kutenderera zvichitevedza wachi.
MVS yakateedzana axial-kuyerera pombi AVS dzakateedzana-kuyerera pombi yekushandisa renji: kuwanikwa kwemvura mumaguta, mabasa ekutsausa, sewage drainage system, tsvina tsvina chirongwa.
• Sump yekupomba yakajairwa
• Slurry & semi yakasimba zvinhu
• Kunongedza zvakanaka - yakakwira pombi yekugona
• Dry inomhanya kunyorera
• 24 maawa akavimbika
• Yakagadzirirwa nzvimbo dzakakwirira dzakapoteredza
Phunyanzvi hweSampuro Project
TWP akateedzana Nhare mbiri inobata Diziri Injini Dhiraivha ...
MS Electrical Yakakwira Pressure multistage yakachena wa ...